चोरी भएको मोटरसाइकल नंबर चेन्जगरि ट्राफिक प्रहरीले नै चलाएपछि भयो हंगामा
विराटनगर,माघ ११ गते । तपाइको सवारी साधन हराए तपाइँ के गर्नुहुन्छ ? हराएको सामान भेटाउने आशमा पक्कै पनि प्रहरी चौकीमा उजुरी गर्नुहुन्छ । तर, भनिन्छ नि रक्षक नै भक्षक भएपछी कसको के लाग्छ र ? ठिक यस्तै भयो विराटनगरमा । विराटनगर महानगरपालिका वडा नं.७ मा रहेको हिमगिरि मेडिकलको नाममा दर्ता भई विराटनगर महानगरपालिका वडा नं.९ बस्ने सुनिल अटलले
चलाउँदै आएको च्यासिस नम्बर MBLJAOZEMF9M 29244 इन्जिन नम्बर JAOZECF9M 29427 नम्बर भएको सुपर स्पेन्डर कालो रंग भएको को.२३ प .६९२१ नम्बर मोटरसाईकल २०७६ साल श्रावन २४ गते मोटरसाईकल धनिकै घरबाट चोरी थियो । निज सुनिल अटलले आफ्नै घरको कम्पाउण्ड भित्र राखेको मोटरसाईकल हराएको हुँदा खोजतलास गरि पाउँ भनि २०७६ साल भाद्र २२ गते जिल्ला प्रहरी कार्यालयको उजुरी छानबिन शाखामा निवेदन पेश गरेका थिए ।
तर उजुरी छानबिन शाखाले २०७६ साल अशोज ३० गते उक्त मोटरसाईकल यस कार्यालय तथा मातहत समेत बाट खोजतलास गर्दा हालसम्म फेला नपरेको साथै खोजतलास कार्य भइरहेको व्यहोरा पत्र मार्फत निज सुनिल अटलालाई जानकारी दियो । शनिवार बिहान १० बजे तिर एकजना ट्राफिक प्रहरी सुनिल अटलकै अटल फार्मेसी अगाडी सुपर स्पेन्डरमा आएर पार्किङ्ग गरे अनि अटल फार्मेसीमा औसधि किन्न गए ।
अचानक अटल फार्मेसी बाट आँखा पुग्यो ति ट्राफिकले पार्किङ्ग गरेको उक्त मोटरसाइकलको भाइजरमा लेखेको जय सियाराम मा । त्यसपछि अटलले उक्त मोटरसाइकलको च्यासिस नम्बर हेरे र थापाए कि त्यो त उनकै हराएको आफ्नै मोटरसाइकल हो । फरक यति मात्र थियो को.२३ प .६९२१ नम्बरको मोटरसाईकललाई परिवर्तन गरि बा ३५ प ५८९३ बनाएर चलाइएको थियो ।
अटलले ति ट्राफिक प्रहरीलाई उक्त मोटरसाइकलको कागजात मागेपछि ट्राफिक प्रहरी अक्क न बक्क पर्न पुगे त्यसपछि सुरु भयो बिबाद । सैयौंको भिडले ट्राफिक प्रहरी माथि प्रस्न तेर्साइरहेको थियो । त्यसपछि प्रहरीको टोलि आयो र मोटरसाइकल र उक्त ट्राफिक प्रहरीलाई छानबिनका लागि भन्दै प्रहरी कार्यालय लिएर गयो ।